के तपाईं सञ्जाल ब्लगहरू (PBNs) बाट ब्याकलिङ्कहरू खरीद गर्न सिफारिस गर्न सक्नुहुन्छ?
मेरो लागि, म न त सिफारिस गर्न सक्दिन, न त तपाईंलाई पहिले नै देखाउने कोसिस गर्न सक्दछु. यो चीज हो कि म व्यक्तिगत रूपमा ग्रे-टोपी एसईओ जस्तो महसुस गर्दैन, वा परमेश्वरले ब्ल्याक-ह्याट एसईओलाई मनाउनुहुन्न. र निजी सञ्जाल ब्ल्याकबाट ब्याकलिंकहरू खरीद गर्दा Google द्वारा घृणित निश्चित निश्चित कार्यक्रम हो. मलाई विश्वास छ कि सञ्जाल ब्लगहरू (पीबीएनहरू) बाट भुक्तानी ब्याकलिङ्कहरू प्राप्त गर्दै, कुनै पनि कुरामा उनीहरूले कसरी सफल हुन सकेन, सम्भवतः एक भारी र कठिन रूपमा प्राप्त गर्न योग्य (कहिलेकाहीँ पनि अपरिवर्तनीय) रैंकिंग भक्ति हो।.
यद्यपि, निजी सञ्जाल ब्लगहरू अझै लोकप्रिय छन्, र मैले पनि धेरै नौसिखिया वेबमास्टर्सलाई सम्झौता गरे र एसईओ मा एकदम तत्काल र सुन्दर मात्रात्मक प्रगतिबाट लाभ उठाउँछु।. तर सत्य के हो? सञ्जाल ब्लगहरूबाट ब्याकलिङ्कहरूको बारेमा राम्रो तरिकाले निर्मित निर्णय लिनु हुन्छ? चलो सबै कुरा स्पष्ट गर्न प्रयास गर्नुहोस् - केवल धेरै चिसो तथ्याङ्क र मेरो छोटो सुझावहरूको साथ उनीहरूका प्रविधि र विपत्तिको वजनमा. सबै पछि, यो केवल तपाईं निर्णय गर्न माथि छ.
सञ्जाल ब्लगहरु बाट ब्याकलिङ्कका लागि राम्रो छ:
एसईओ को नियंत्रण हो, मेरो मतलब छ कि तपाईं आफ्नो प्रतियोगिहरु मा एक शक्तिशाली लाभ प्राप्त गर्न सक्छन्. सबै कुरा सरल छ - पीबीएनहरूबाट लिङ्कहरू लिने हो भने तपाईं आफ्नो लिङ्कहरू अनुकूलन गर्न निःशुल्क हुनुहुन्छ जस्तै पागल र लिङ्कका लागि कुनै पनि सम्भावित विकल्पहरू परीक्षण गर्नका लागि।. हो, यो असामान्य आकर्षक सुविधा हो - किनकी किनकि कुनै अन्य रणनीति छैन कि यो स्वतन्त्रतालाई सबै क्रियाकलापमा जाँच गर्न को लागि - यहाँ र अब.
तत्काल उच्च प्राधिकरणबाट लाभ उठाउँदै, PBN सँगै तपाईंले पहिले नै अवस्थित वेबसाइटको उमेर र सुअवधि अधिकार लिन सक्नुहुन्छ - बिना विलम्ब. सञ्जाल ब्लगहरूबाट खरिद ब्याकलिंकहरू अझ बढी आकर्षक लाग्न सक्छन, विशेष गरी यो विचार गर्नुहोस् कि यो प्रकारको लिंक विशेष गरी विशुद्ध प्राकृतिक तरिकामा निर्माण गर्न कठिन छ।.
धेरै समय र प्रयास सुरक्षित गर्दै, केवल किनभने PBN मा शर्तहरू - तपाईले आउटसोच वा रिस्टोर निर्माणको साथ काम गर्न आवश्यक छैन. मेरो लागि, यो एक कठिन कार्य को लागि सही अवसर को पहिचान गर्न को लागी शायद शायद समय बिताउने प्रयासहरूको सबैभन्दा खराब हो जुन मैले गरेको थियो.
जबकि पीबीएस अविश्वसनीय रूप देखि उचित समय-बचत गर्दै छन्, उनिहरु लाई पारंपरिक लिंक इमारत मा अंततः कठिन चुनौतिहरु को सामना गर्न को लागी दरवाजा खुला छ. मेरा मतलब, उदाहरणका लागि, कहिलेकाँही वृद्ध र विश्वसनीय डोमेनबाट यी उच्च PR ब्याकलिङ्कहरू कमाउन लगभग असम्भव छ. तपाईं यो माथि हुनुभन्दा अघि, शायद दिशानिर्देशहरू तोडेर बिना कठिन व्यवस्थापन योग्य देखिन्छ. आखिर, वास्तविक सम्बन्ध वा कुनै पनि अन्य योग्य पहुँच निर्माण गर्न आफ्नो समय र प्रयास को निवेश - तपाईं कहिल्यै पनि कुनै आशा वा अयोग्य परिणामहरू दिन सक्दैन, लामो समयसम्म साझेदारीमा ग्यारेन्टी प्रगति भन्न नसक्ने.
खैर, यहाँ नेटवर्क ब्ल्याकबाट ब्याकलिङ्कको बारेमा केही खराब कुराहरू छन्, केवल पूर्णताको लागि. सबैभन्दा खराब-केस स्थितिमा, लिङ्क इमारतका लागि PBN प्रयोग गरी म्यानुअल दण्डको परिणाम हुन सक्छ - कहिलेकाहीँ यो सबै विद्रोह गर्न सकिन्छ जब सबै खोजीमा स्थायी प्रतिबंध संग समाप्त हुन्छ. यो यो भयो भने, त्यहाँ तपाईको दुर्भाग्यवश वेबसाइट वा ब्लग पुन: निर्माण गर्न बाहेक केहि गर्न सक्नेछ - धेरै शुरुवातबाट Source .